Izvo zvinhu zvina zvaunogona kunyanya kunetseka nazvo
Imwe --- Mushure mekutengesa Sevhisi
Kazhinji zvinhu pazvinosvika kwainotengwa nemutengi, tichazvigadzirisa mukati maawa makumi mana nemasere kuburikidza nekufona kana chero chekushamwaridzana nekutaurirana senge whatsapp, wechat nezvimwe. kana paine zvimwe zvinetso zvezvinhu. Zvekuisa, isu tinopa vhidhiyo kana yekushandisa rairo iwe. Nekudaro, kana iwe ukaona paine zvimwe zvinhu zvakaputswa uye zviri mukati mevimbiso, isu tiri mukutarisira kwekuchengetedza mahara. Asi mutengi anofanira kutakura zvinhu kudzoka.
Maviri-- Hunhu Hwakanaka
Zvinhu zvedu zvakapasa ISO 9001 bvunzo, zvinoratidza kuti vanokodzera zvirinani. Uye zvakare, yega yeakare-chiratidzo mwenje ichaedzwa kuburikidza nekudurura mvura uye kurova, ex-proof bvunzo uye anti-ngura bvunzo. Kunyangwe isu tikangokuvimbisa iwe kuti mwenje yedu ine makore matatu garandi, muchokwadi, inogona kushandiswa kwe5 kusvika kumakore masere.
Kune gumi nevashanu vekutsvagisa vashandi mukambani medu, uye ivo vane basa rekusimudzira tekinoroji yekutsvagisa uye basa rekusimudzira; kuratidzira uye kutora sarudzo kwemapurojekiti ekambani yeR & D; iko kugadzirira, kusimudzira uye kunyora mushumo kwekutsvagisa nekusimudzira miedzo uye kuvaka kwenzvimbo dzekutsvagisa kwesainzi uye zvikwata zvekutsvaga kwesainzi.
Isu tinopa nzira nhatu dzekutakura nevatengi vedu. Kune yakakura kuraira, kufambisa kwegungwa ndiko kwedu kwekutanga sarudzo Ipo yeiri diki odha, kuyedza kurongeka kana sampuro odha, isu tinosarudza epasirese kutaura kana mweya kutakura kana mutengi achigona kuita mari yekutumira. Kune sarudzo yechiteshi, isu tinowanzoendesa mwenje kubva kuChongqing, Ningbo, Zhejiang kana Guangzhou port. Kana mutengi aine yavo yekumberi kuChina, tinogona zvakare kushandisa avo vanoendesa kumberi.
Kazhinji, kugadzirwa kwemasampuli kunotora mazuva mashanu kusvika kumasere uye zvakajairika batch kodhi zvinotora mazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri neshanu. Kurumidza odha inogona kurongedzwa pamberi simbiso.